Ngwa kachasị mma iji see Anime na gam akporo | Gam akporosis
O doro anya na Anime bụ otu n’ime ihe ndị a na-ere ere n’ụwa niile n'ihi usoro dịnụ. Otu n'ime ihe ndị na-ebu ibu na afọ ndị na-adịbeghị anya bụ nnukwu mbupụ nke ndị chọrọ inweta akara aka na ihe okike ha, dị mkpa maka ịhapụ ọrụ nke aka ha.
Storelọ Ahịa Play nwere ọtụtụ ngwa iji see Anime, ngwaọrụ ndị dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite site na ọkọ na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzọ ụkwụ na ọkwa dị elu dị elu. Naanị inwe ekwentị mkpanaaka, mbadamba ma ọ bụ PC nwere emulator, ị ga-enwe ike iwepụta onye omenka ahụ n'ime gị.
1 DrawShow: mụta ise Anime
2 Detuo Anime site na nkwụsị
3 WeDraw - Etu esi ese Anime & Ihe osise
4 Etu esi ese Anime Ultra Instinct
5 iDraw: Nkuzi Anime & Hot iji see Anime
6 Ntuziaka maka ịbịaru anime Naruto
7 Mụta Ihe osise
8 Etu esi ese Anime
9 Nkuzi Anime nkuzi
10 Anime na manga Go see ndị na-ese katuunu
DrawShow: mụta ise Anime
DrawShow bụ ngwa ime mgbanwe maka mobile ngwaọrụ, mbadamba na ndị ọzọ, gụnyere Windows, ebe ị nwere ike ibudata ngwa ahụ, yana iulateomi ya. Ngwa a ga - egosi gị ahịrị niile ị ga - agbaso iji mee ihe osise zuru oke, usoro dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ya.
Ihe nkuzi a karịrị otu narị, ewepụghị anime na manga lekwasịrị anya na isiokwu ndị ọzọ, mana ọ bụghị naanị ya na-atụle ha niile nke ọma. The nkuzi na-emeso ihe ndị ọzọ dịka eserese ụgbọ ala, anụmanụ, ihe odide, ụlọ na isiokwu ndị ọzọ dị ka ihe osise.
Ngwa nwere mbugharị ka mbugharị na na na ebe nke a na-esekarị ya, na-enye gị ohere ịmepụta gifs animated ma chekwaa ha ịkekọrịta ha na netwọkụ mmekọrịta. Ngwa a nwere mgbasa ozi, mana ha anaghị ewe iwe ma ọ bụrụ na ịchọrọ iji ngwa ahụ rụọ ọrụ.
Quam ad hauriendam anime yana doceo - DrawShow
Developer: Anime DrawShow
Detuo Anime site na nkwụsị
Ọ bụ ngwa dị mfe zuru oke ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite site na ncha imepụta ihe osise anime na manga, ha nile kọwara ya n'uzo zuru oke dika ndi klas ha na onye nkuzi nke onwe ha. Drawing Anime site na nzọụkwụ bụ ugbu a kachasị mma ma ọ bụrụ na ị ka bụ onye mbido ma ọ bụ ọ bụrụ na ị dị mma ịme ihe osise.
Ozugbo ị mepee ngwa ahụ, ọ ga - eme ka ị were usoro mbụ, gụnyere ịnwe ike ịdọrọ isi, ntutu, uwe, toso na isi ihe ndị ọzọ nke ọrụ ahụ. A ghaghị ịkọwa nkọwa nke ọ bụla n'ime ya ka njedebe ikpeazụ wee zuo oke iji gosi ya, ma ọ bụ na netwọk mmekọrịta ma ọ bụ na gburugburu ebe ị na-akwagharị.
Ibu ibu nke ngwa a bu ihe megabytes 2,9Na mgbakwunye, nwụnye anaghị achọsi ike nchekwa ọ bụla iji ya na ekwentị. Ọ bụ ezigbo ngwaọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite, na-aga n'ihu ma ọ bụrụ na ị nwere ahụmịhe gara aga na akwụkwọ na pensụl.
See Anime Kwụpụ site Nzọụkwụ
Developer: Cat ngwa
WeDraw - Etu esi ese Anime & Ihe osise
Ọ bụ otu n'ime ngwa ọdịnala nke ị gaghị echefu ma ọ bụrụ na ịchọrọ isere egwuregwu na eserese, gụnyere ụfọdụ akara ngosi a maara nke ọma nke usoro na videogames. Enwere eserese dịka Mario si Nintendo, Goku na ndị enyi ya site na Dragon Ball, mana ndị ọzọ sitere na usoro Naturo.
Ngwa a ga - akuziri gị ka ị see ihe odide kachasị amasị gị, ma ịmalite site na ncha, na etiti dị elu ma ọ bụ na ihe a na-ewere dị ka ndị toro eto. Nwere ike ibudata ọrụ ahụ na-enweghị mkpa inwe njikọ, iji kekọrịta ha na netwọkụ mmekọrịta, WhatsApp, Telegram na ngwaọrụ ndị ọzọ.
WeDraw - Etu esi ese Anime & Ihe osise Ọ bụ ngwa a na-ewere dị ka agụmakwụkwọ, ọ ga-enyekwa gị ohere ịdọrọ eserese dị iche na ibe oghere. A na-eji ngwa ahụ akpọrọ ihe nke ukwuu, ihe edeturu bụ 4,3 n’ime isi 5 ma ọ dị ugbu a ihe dịka nde ihe ntanetị.
WeDraw - Otu esi adọta Anime
Etu esi ese Anime Ultra Instinct
Ọ bụ ngwá ọrụ ezubere iji gbaa gị ume mgbe ị na-eke ihe osise, nke a bụ otu esi ewepụta Anime Ultra Instinct, nke Zerojeck kere. N'ime ya, ị ga-ahụ nkuzi iji see ihe odide kachasị amasị gị, ma ha sitere na usoro a ma ama ma ọ bụ site na ụfọdụ ndị a na-ahụghị na Spain.
Ọ naghị eji ịntanetị eme ihe, ma e wezụga ya, ọ na-eche na a ga-emelite ya oge niile na eserese ọhụụ, ewezuga igosi usoro site na ntinye iji bụrụ onye isi nke anime na manga. Ga-enwe ike iji ya dịka ntụnye mgbe ị na-ese ihe nkiri nke ụdị ndị ọzọ na-abụghị nke na-abịa na ndabara.
A ga-anụcha usoro ahụ, nke dị mkpa mgbe a na-atụle ya site na ndị ọkachamara dị ka ebe dị ụtọ maka ndị nwere ụfọdụ mmụta. Ngwa Otu esi adọta Anime Ultra Instinct dị mma maka ndị mbido na ndị ọkwa etiti site na ịkọwa ụfọdụ ọrụ ị na-eme kwa ụbọchị.
iDraw: Nkuzi Anime & Hot iji see Anime
iDraw: Anime Tutorial & Hot to Draw Anime bụ otu n'ime ihe kacha mma site na-agbakwụnye ọtụtụ ihe odide kachasị amasị, ọ bụghị site na usoro Naruto, Dragon Ball na usoro ndị ọzọ amaara ama. Ihe mbụ bụ akara ihe ndị mbụ, otu n'ime ha bụ ịdọrọ ebe ndị dị mkpa, dị ka isi, ahụ na nkọwa anya.
Nkuzi nkuzi a enweghi mmasi, ma ị bu onye mbido ma obu onye okacha amara, nke obula n’ime ha si na ya bilie, ma inwere ike igha ihe omumu a ma oburu n’ichoo na igha eme ya The interface doro anya ma dị ọcha, ịbụ otu n'ime ihe dị mfe karịa echiche ndị gara aga.
Chee echiche ime Goku dika onye isi, ị ga-enwe ike wepụta ọ bụla isi mmewere nke mere na ọ nwere ike hụrụ dị ka a ọkachamara ịbịaru. Ngwa a dị ihe megabytes 13, ihe dị ka nbudata 100.000 ma dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ma ọ bụ gaa n'ihu na klaasị iji wepụta akụkụ gị kachasị mma. Ọ dị irè ma ọ bụrụ na ị nwere gam akporo 4.4 ma ọ bụ nke ọhụrụ.
iDraw: Nkuzi Anime & Etu esi ese Anime
Developer: Weghachi Ventures
Ntuziaka maka ịbịaru anime Naruto
O doro anya na ọ bụ otu n'ime ngwa ndị emere iji see Naruto anime, ebe ọ bụ na ọ nwere ihe odide nke usoro dị ezigbo mkpa. Ihe omumu di nfe ime, karisia ma ichoro ibu onye nkuzi n’ime obere ihe n’izu ato, oge ha na-enye iji mee eserese zuru oke.
Ihe dị mkpa bụ mpempe akwụkwọ, pensụl na nchicha iji depụta eserese ndị na-anọchitekarị anya ma zuru oke. Ihe omumu bu ihe di nkpaOnye ọ bụla n’ime ha ga-eweta ihe kachasị mma n’ime gị, na -emezue ụfọdụ oge ọ bụla ịmalitere ngwa ahụ.
Maka Fans nke usoro Naturo ọ zuru okeỌ bụrụ na ịchọrọ ilekwasị anya na Anime ndị ọzọ, ọ kachasị mma ịnwale otu ma ọ bụ nke ọzọ nwere ezigbo nchekwa data nke onyonyo. Ezigbo ihe banyere Ntuziaka iji see ihe nkiri Naruto bụ ịdị arọ ya, dị n'okpuru megabytes 20.
Ntuziaka iji see anime naruto
Mụta Ihe osise
Mụta ịbịaru ngwa na-agụnye nkuzi maka eserese pensụlE wezụga nke ahụ, ka onye ọ bụla n'ime ha gaa na-akpụzi ma na ngwá ọrụ ma n'èzí ya. Tinye ihe karịrị ndị dike 50, ụfọdụ bụ ndị ama ama na ndị ọzọ enweghị ọtụtụ ihe nchekwa data dị mkpa.
Ọ na-eji njikọ Internetntanetị iji budata eserese ọhụrụ ahụ, ma ọ bụghị ya chọrọ ya ebe ọ bụ otu n'ime ntọala kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-emelite kwa oge. Ngwa ahụ ruru 4,5 site na isi 5 ga-ekwe omumeỌ gafere nde nbudata na interface bụ otu n'ime ihe kachasị mfe iji.
Developer: Mụta Ihe Nile
Etu esi ese Anime
Iji ihuenyo ekwentị ị ga-ese ọnụ ọgụgụ na ndepụta nke ihe odide anime, na-amalite site na isi ma na-ejedebe na ọrụ ndị na-atọ ụtọ. Ọ na-enyere gị aka ịmepụta eserese mbụ gị, ma ọ bụ nke dị mfe ma ọ bụ ụfọdụ dị mgbagwoju anya nke na-abụkarị ọkwa dị elu.
Ihe a na-ejikarị na ngwa ahụ bụ pensụl, ma ọ bụ ịmalite, mgbe ahụ ị nwere palette agba na ọtụtụ narị agba dị iche iche, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ a ga-agbakwunye na akpaghị aka. Ihe akara bu 4,5 n’ime 5 isi, kariri nbudata 10.000 ma zuru oke maka mmuta izizi.
Nkuzi Anime nkuzi
Ihe nkuzi ha zuru oke iji bido ịmalite n'ụwa nke ọ bụrụ na ị dị mma ịmeghe oghere na okike eserese. N'ime ngwa a, ị ga-agabiga ịme anime ihu, bụrụ otu n'ime ezigbo iji bido ma ọ bụrụ na ị chọpụtabeghị ọnwụnwa na ịnwale ndị ọzọ dị mgbagwoju anya.
Ọtụtụ nkuzi dị iche iche, dị mma maka na ha na-egosi usoro nke ukwu ma hapụ gị ka ị see ka ị na-aga, ezigbo ma ọ bụrụ na ịmalite site na isi. Ọ dị ihe dị ka megabytes 56, ọ na-ejikwa ebe nchekwa ma ọ bụ otu n'ime ndị ahụ oge emelitere na ọrụ ọhụrụ.
Anime na manga Go see ndị na-ese katuunu
Ndị dike katuunu nwere nnukwu ebe a inwe ihe karịrị iri atọ dị iche iche, gụnyere usoro a maara nke ọma. Ngwa Ntanetị & Egwuregwu na-ebupụta otu ngwa ọdịnala zuru oke maka ịchọrọ ịzụlite mkpụrụ edemede ọ bụla na usoro dị iche iche, jiri nzọụkwụ na njupụta ma jupụta agba, yana inwe ike ịkekọrịta ha na netwọkụ na ịpị otu pịa.
Iji nweta ihe kachasị mma n'ime gị, ị ga-eji naanị otu mkpịsị aka, ebe ọ dị mfe ịme ntụgharị nke ọ bụla n'ime ha. N'agbanyeghị na emelitere obere, Anime na manga Go sere ndị dike katuunu dị mma maka ụdị ọrụ ọ bụla. Ọ karịrị naanị 13 megabytes.
Developer: Ngwa Ngwaọrụ & Egwuregwu
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa kacha mma iji see Anime na gam akporo
Ngwa 8 kachasị mma iji mụta ịgba egwu hiphop